Kudar Animation CSS Boggaaga WordPress adoo adeegsanaya Plugin CSS Hero | Martech Zone
Kudar Animation CSS Boggaaga WordPress adoo adeegsanaya CSS Hero's Plugin
Geesiga CSS waa ilo aad u fiican oo loogu talagalay wax ka beddelka CSS ee mawduucyada WordPress in muddo ah. Qalabka noocan oo kale ah ayaa ka dhigaya u-habeyn si fudud u adeegsadayaasha isticmaala WordPress ee doonaya inay qaabeeyaan nashqaddooda, laakiin aan lahayn waayo-aragnimada sireed ee CSS ee loo baahan yahay.
Noocyada Halyeeyada CSS
Muuji oo Guji Isdhexgalka - jiirka jiir oo guji curiyaha aad rabto inaad wax ka beddesho oo aad ku hagaajiso si uu ugu habboonaado baahiyahaaga
Mawduuca Agnostic - Ku dar awoodaha geesiyaasha mawduucyadaada, looma baahna codeyn dheeri ah oo ku saabsan mawduucyadaada waxayna u oggolaaneysaa xakameyn buuxda astaamaha guryaha aad rabto in wax laga beddelo.
Tifatiraha Qalabka-Habka Tooska ah - Isku hagaaji oo habee qaabka mawduucaagu ugu soo baxayo aaladaha gacanta lagu hayo, ku dar ku-beddelka qalabka u gaarka ah qalabka.
Midab Caqli Qaadasho - Ku darista taabashadaada shakhsi ahaaneed mawduucyadaadu hadda way fududahay inaad tilmaamto oo aad gujiso midab, Hero sidoo kale wuxuu keydiyaa midabbadaadii ugu dambeeyay ee la isticmaalay.
Adeegso 600 + Fonts - Ku dar taabashadaada fasalka iyo shakhsiyaddaada Mawduucyada WordPress adoo ka dooranaya liis ballaaran oo caan ku ah websaydhyada iyo glyphs-ka
CSS oo isku dhafan - Dhisidda wejiyada, hooska sanduuqa, hooska qoraalka iyo dhammaan guryaha casriga ah ee CSS hadda waa dhibic oo guji arrin.
Lock-Lo ma jiro - Ma u baahan tahay inaad u guurto madal kale? Walwal la'aan, dhammaan halyeeyada ay soosaartey CSS waxaa lagu dhoofin karaa hal guji.
CSS Tifatiraha Taariikhda - CSS Hero wuxuu si otomaatig ah u kaydiyaa dhammaan tifaftirkaaga liistada taariikhda oo faahfaahsan, dib ugu noqoshada iyo horay u qaadista tillaabooyinka taariikhda ayaa u fudud sida gujinaya badhannada ka noqoshada.
Kormeeraha Geesiga CSS - Kormeeraha waa CSS Hero Plugin kaas oo u oggolaanaya xakameyn dheeri ah lambarka Hero-ga ah. Isbatooraha waxaad si fudud u sifayn kartaa, wax uga beddeli kartaa, ka saari kartaa qaabka geesinimada loo abuuray ama xitaa ku dar mid kuu gaar ah sidaad caadiyanba ku samayn lahayd aaladda baarista websaydhka aad ugu jeceshahay sida Kormeeraha Chrome ama Firebug.
Raad-fudud - CSS Hero waxaa laga soo dhisay aasaaska si uu u noqdo “raad raaci”, asal ahaan wuxuu adeegsadaa kheyraadka kaliya inta uu bilaabayo tifaftiraha tooska ah ee css. Hoos uma dhigi doonto maamulkaaga WordPress ama kuma mashquulin doono xulashooyin badan oo xulasho ah. Waxay isticmaashaa xusuus yar halka ay runti ka qabto shaqo waxtar leh.
Dhawaan la bilaabay waa maktabada CSS3 Animate It, oo bixisa waxyaabo badan oo animation qabow ah, oo ay ku jiraan soo kabasho, fade, flip, garaaca wadnaha, isku shaandheyn, gariir, iyo ruxid. Dhagsii fiidiyowga kujira qoraalkan.
Tags: animationanimation csssoo kabashada csscss libdhaycss flipgeesiga cssmawduucyada geesiga cssgaraaca wadnahacss wareejicss ruxcss wigleanimation wordpresswordpress csstheme word